Ungayidumisi imoto kadizili uma seyingenwe nguphethroli | Isolezwe
Ungayidumisi imoto kadizili uma seyingenwe nguphethroli
ezezimoto / 23 November 2018, 4:50pm / STHEMBISON SHANGASE
KWASUKA futhi lokho kwathi mangithi zonke ezilandela le ngosi mazikhwengxele amagiya ziyikhuze maqede ithobeke ibambe umthetho insimb’yomlungu.
Lokho kusho khona ukuthi ufufunyane lwethu oluzishaya sasimo semoto ehamba ngokubuswa yimithetho yomgwaqo, seluthi masithi gozololo eceleni komgwaqo lapho kuphephe khona bese sivula ama-hazard ezimoto zethu nama hazard abhaliwe kwelakho lodumo lokuwela umfula ugcwele.
Namhlanje sithi ake sicaphune nansi incwadi evela komunye umfundi wale ngosi osenkingeni.
“Sawubona Mnuz Shangase
Ngomhlaka 17 Julayi 2018 ngangena egaraji lakwaShell eVerulam ngacela bangifakele udizili kaR300 emotweni yami iFord Ranger 3.0 XLT kadizili. Esikhundleni sika dizili bangethela uphethroli kwathi ekugcineni bengeza ngo dizili owamalitha angu-11. Ngabuza ukuthi kwenzenjani uma ngibona eseqala phansi ephinda ethela kanti ubesethelile wathi lona omunye udizili uyibhansela. Ngahamba amakhilomitha angaphezudlwana kuka 60 imoto yaqala ukubhabhaza yashunqa. Ngomhla ka-18 Julayi ngabuyela khona kwavela ukuthi ukuthi baxube udizili nophethroli. Ngacela ukuthi umchathi wezimoto abhale incwadi evumayo ukuthi ungixubelile, wayibhala. Babe sebeyikhipha wonke udizili oxubene nophethroli bayimunca. Ngomhla ka-18 Agasti imoto ishaye injini kwathi uma kubhekwa kwatholakala ukuthi ibulawe ukuxuba udizili nophethroli. Manje imoto ilokhu yahamba ngo-Agasti iyolungiswa ayibuyile kuze kube manje. Uma ngithi ngiyalandela omunye uthi mangiye komunye, sekuyinkombankombane.”
Ngiyayiqonda ukuthi le ncwadi ifisa sigqugquzele ukukhandwa kwemoto kodwa-ke sicabanga ukuthi ake sizame ukucacisa ukuthi isebenza kanjani injini ka dizili uma uyiqhathanisa neka phethroli.
Udizili awuvuthiswa yizinhlansi kepha uvuthiswa umoya oshisayo yingakho izimoto zakuqala bewufike uyikhanyise ukhiye kuze kucishe ilambu elisawolintshi ngombala ngaphambi kokuthi uyistathe injini. Uphethroli uvutha kalula kodwa udinga izinhlansi hhayi ukushisa kuphela.
Into eyenzekayo ukuthi imoto kadizili inama plaki angahlakazi nhlansi kodwa afana nosungulo olushisayo okuthi uma ukhiye usuwuvulile bese lushisa lube bomvu njengolwe hitha yasendlini. Lolu sungulo olushisayo lusebenza ngokufana ne hitha lufudumeza umoya osemgodini wephistini. Uma lo moya usushisa kakhulu bese uyayistatha imoto, ithi ngesikhathi injini iphendulwa yisitatha bese kwakheka isamuku kuqumbelane phakathi bese amatsako kadizili akhwife umkhemezelo kadizili kulowo moya ominyene bese kugqamuka ilangabi. Hhawu dumiyani imoto kadizili. Lapho-ke nevalve lokudedela umoya liyavula liphefumulise lidedele umoya osucishwe ukudundubala kwephistini.
Kulapho-ke intuthu iqala ukuqhamuka emumva lokho kusuke kuqinisekisa ukuthi selidume ladlula lapha ebhodweni. Kuba yilowomdlalo-ke njalo ukuduma kwemoto kadizili. Omakhenikha bezimoto bazokutshela ukuthi izinjini zikadizili zidinga i-battery enamandla kunemoto ka phethroli ngenxa yokuthi isuke ifuna ukubasa loluya sungulo olusahitha.
Izimoto zikadizili zakudala bezivuma ukuduma ngisho i-battery ingekho uma uzoyikhikha indawo ende ibigcina idumile ngoba izinhlansi ayizidingi kodwa ifuna kushise. Angithi uma injini iphenduka isikhathi eside noma ngabe i-battery ayikho kugcina kufudumala phakathi ebhodweni lephistini ngenxa yentshukumo (friction). Uma kuminyana utshumo nomkhizo usukhwifekile ebhodweni kanti sekufudumele hhawu izoduma leyo njini kadizili.
Uma uzoxuba uphethroli nodizili uyayidida leyo moto yingakho izohluleka ukubasa ngoba uphethroli uthi ufuna umhlakazanhlansi kanti udizili uthi awufune nhlansi wona ufuna kushise umoya nje qha. Ngenxa yokuthi umgudu ohamba udizili wakhelwe ukuhambisa into esamafushana uma sekuhamba into enesibabuli esiphezulu uyoma.
Yikho-ke lokho okubulala namatsako adlulisa udizili awuyise enjinini. Udizili ngingawufanisa nobisi emphinjeni wemoto kanti uphethroli ngingawufanisa nomlaza.
Uma sekwenzekile-ke kwatheleka ngephutha uphethroli emotweni kadizili ungalinge uyidumise futhi ungawukhanyisi ngisho ukhiye. Okufunekayo ukuthi uyidudulele eceleni bese iyampompwa ukhishwe wonke.
Uma uke wayivula ukhiye iphampu kadizili iyaqala iwududule iwunyusele enjinini. Noma ngabe awuyidumisanga kodwa amathuba okuthi ungene emithanjaneni maningi kanti nezifonyo ama filtha kadizili awakulungele ukuphatha uphethroli. Ngakho ukuvika umonakalo omkhulu nabethi bakaphethroli mabaqikelele ukuthi bafaka okuyikho yini. Ngokunjalo nomshaleli bamagade ukuthi bamthelela akucelile yini.
Hhayi-ke sesibhodlile lwehla nofuqane lofufunyane olusiphethe. Sesingawacisha ama-hazard siqhubeke nokushayela ngokubuswa yiyo yonke imithetho yezokushayela ukuze sihlangane sisaphilile nangesonto elizayo.
Uma usafisa siyixoxe le ndaba ngena ekhasini lethu Igedlela Lami with Sthembiso Shangase. Yimi owenu nali ikheli ngezansi [email protected]